true marriage /zu-ZA/tools-for-life/marriage/steps/the-adventure-of-marriage.html read 3 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/marriage_zu_ZA.jpg Umshado
Enye indlela yokwehlisa isimo somunye noma bobabili abalingani abafuna ukushiya umshado ukuthi bobabili indoda nomfazi babhale lama-overts nama-withholds. Babhala phansi ama-overts nama-withholds wabo ephepheni, banikezane imininingwane eqondile yesikhathi nendawo yama-overts nama-withholds, nokuthi kwenzakalani noma kwagodlwani. Lapho lokhu sekuphothuliwe, umuntu ngamunye uzothola isipiliyoni ukukhululeka kanye nokubuya ukuzibophezela. (Indlela yokwenza yokubhala ama-overts nama-withholds imbozwe ngokugcwele ku-UbuQotho NokweThembeka Online Course.)
Kungaba nezikhathi, noma kunjalo, lapho ukubhala ama-overts nama-withholds ungakhululi ngokuphelele ukucasuka noma ukuntuleka kwesivumelwano phakathi kwabalingani bomshado. Uma lokhu kwenzeka, ababambisene kufanele baxhumane ngo-Scientology auditor ukusiza ukuphatha lolu daba. U-auditor umuntu oqeqeshiwe futhi ofanelekile ukusebenzisa Scientology processing kubantu ukuze bazuze. Processing kuwuhlobo ekhethekile ukwelulekwa siqu, ehlukile ku-Scientology, lokho kusiza umuntu ukuthi abuke ubukhona bakhe, okungathuthukisa namakhono akhe.
Enye indlela yokubuyisa izinga eliphakeme ukuxhumana phakathi kwabalingani bomshado Ukwelulekwa Ngomshado kwe-Scientology. Lokhu kunikezwa ngo-Scientology auditor.
Indoda nenkosikazi bangasebenzisa ukuxhumana okuhle nokuthembekile ukwakha noma ukuqhubeka nokujabula, nokufeza umshado. Futhi lapha futhi, Scientology online courses zingaba usizo olukhulu kakhulu—njenge UkuXhumana Online Course kanye no Izingxenye zokuQonda Online Course.
Uma bobabili ababambisene basebenzela ekugcineni izivumelwano abazenzile futhi belandela i-moral code, futhi uma lo mbhangqwana ugcina ukuxhumana kukhululekile futhi kuvulekile phakathi kwabo, bazo qinisa ubudlelwano babo.